ဦးသိန်းစိန် | လွှတ်တော် တွင် ဆိုရမည် သစ္စာ အဓိဌာန် ကို ပြောင်းမပေး နိုင် | The FNG
ဦးသိန်းစိန် | လွှတ်တော် တွင် ဆိုရမည် သစ္စာ အဓိဌာန် ကို ပြောင်းမပေး နိုင်
April 23, 2012 · by 21 South News	· in (unnamed), News.	·
လွှတ်တော် တက်ရောက်သည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြု ကိုယ်စားလှယ် တိုင်း ရွတ်ဆိုရသည့် အခြေ
ခံ ဥပဒေ ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက် ပါမည် ဆိုသည့် စကားရပ် အား အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ 
ချုပ် မှ ပြင်ဆင်ပေး ရန် တောင်းဆိုထားသည့် ” အခြေခံ ဥပဒေ ကို လေးစား လိုက်နာပါမည် “ ဆိုသည့်
စကားရပ် နှင့် အစား ထိုးပေး ရန် မလုပ် ပေး နိုင်ဟု ဂျပန် နိုင်ငံ ရောက် မြန်မာ အစိုးရ သမ္မတ ဦးသိန်း
စိန် က တိုကျို ရှိ ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် အမှတ် တရ ပြ တိုက် တွင် သတင်း ထောက်များ ကို ပြောကြားလိုက်
သည် ဟု ကျိုဒို သတင်းဌာနာ က ဖော်ပြ သွားသည်။
ထိုစကားရပ် အား ပြင်ဆင်ပေး ခြင်း မပြု သည့် အတွက် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ကြားဖြတ် ရွေးကောက် ပွဲ တွင်
အနိုင်ရရှိ သည့် NLD ပါတီ မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ သည် လွှတ်တော် တက်ရောက်
မှု မရှိ ဟု သတင်း ရရှိ သည်။
ယနေ့မြန်မာ အစိုးရ ရုံးစိုက် ရာ နေပြည်တော် ဉ် လွှတ်တော် နှစ် ရပ် ပေါင်း အစည်း အဝေး ကို ပြန်လည်
စတင် ကျင်း ပသည်။
ဦးသိန်းစိန် ၏ ငါးရက် တာ ဂျပန် ခရီးစဉ် အတွင်း ဉ် ဂျပန် အစိုးရ က မြန်မာ နိုင်ငံ ရရန် ရှိသည့် ကြွေးမြီ အမေ
ရိကန် ဒေါ်လာ သုံး ဘီလျှံ ကျော် ကို လျှော် ပစ် ပြီး ပင်လပ်ရပ်ခြား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေး အတွက် ODA ဟု
ခေါ်သည့် ချေးငွေများ ထပ်မံ ချေးဌား အုံး မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ နိုင်မှာ နောက် ပြန်လှည့်တာ တွေ ဖြစ်လာမှ မဟုတ် ဘူး ၊ ပြည်သူတွေ ရဲ့အကျိုးစီးပွား အတွက် တူညီတဲ့
ပန်းတိုင် ကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ချင် ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် ကို
အစိုးရ အဖွဲ့ ထဲ ၀င် နိုင် ဖို့တံခါးတွေ ဖွင့် ပေး ခဲ့ တယ် ၊ သူဟာ ပါတီ အကျိုးထက် ပြည်သူ့အကျိုး ကို ကြည့်
သင့်တယ် လို့သမ္မတ ဦးသိန်း စိန်က မိုင်နိချိ ရှင်ဘွန်း သတင်း စာ ကို ပြောသည်။
(JAPAN OUT AFP PHOTO / JIJI PRESS)
← ပထမ အကျော့ ပြင်သစ် ရွေးကောက်ပွဲ မှာ ဖရန်ဆွာ ဟော်လန်း အနိုင်ရ
5GB အခမဲ့ သိုလှောင်နိုင်ပြီး 16 TB အထိ သိုလှောင် နိုင်မည့် Google Drive ကို မိတ်ဆက် →
10 responses to “ဦးသိန်းစိန် | လွှတ်တော် တွင် ဆိုရမည် သစ္စာ အဓိဌာန် ကို ပြောင်းမပေး နိုင်”
Pan Ya Moe April 26, 2012 at 8:19 pm · ·
NLD အမေစုတို့ ဖက်ကလည်း..စကားလုံးကိုကြိုတင်မညှိနိုင်ထားဘူးလား အခုလွတ်တော်ဝင်ခါနီးမှ မြင်တတ်တာလား..အယင်တခေါက်နှစ်ခေါက်..ဦးသိန်းစိန်နဲ့ သြွးတိုင်ပင်ဆွေးနွေး တာဘာကိုဆွေးနွေးတာလဲ..ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာကိုလည်း..ပြည်သူတွေကိုတခါမှမပြောဘူး.. ဦးခင်ညွန့် လက်ထက်ကလည်းအမေစုသွားဆွေးနွေးတာ.ခင်ညွန်ပဲ..ထောင်နိန်းစံလို့ အခုရဟန်းဖြစ်သွားပီ အခုထိထုပ်မပြောဘူး ဘာသဘောလဲ..ပြည်သူကိုမယုံလို့ လားတောမသိဘူး..ဒီအတိုင်သာဆိုရင်.. ပြည်သူတွေကNLD ပါတီကို ခွါသွားလိမ္မည်..သတိထားပါ..ပြည်သူတွေအထဲ့ မှာ..ဝေဖန်နေကြတာ..အမေစုပြောထားစကားကို စောင့်ကြည်နေကြတာ…မဲဆွယ်တုန်းက..ဦးတည်ချက်..၃..ခုနဲ့ အမေစုတိုပါတီမဲ့ ဆွယ်တာ.. တိုင်ပြည်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုပြီး..ဦးသိန်းစိန်လည်းဒီအတိုင်ပြောတာ..အခုပြည်သူတွေမှာနကိုယ်အတိုင်းပဲ ဘာတရားဥပဒေမှမစိုးမိုးသေးဘူး..တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာတနှစ်ပြည့်ပြီ..အလုပ်သမားတွေကလည်း..ဘာ အခွင့်အရေမှမရဘူး…တနေ့ ကိုအလုပ်ချိန်၁၂နာရီးလုပ်လို့ ပိတ်ဆံလည်းမရဘူး..သေကြတောမယ်..ဒါပဲထင်တယ်..အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဆိုတာ…..ပြည်သူတွေ..စစ်ကျွှန်ဘ၀မှ..နင်းပြားဘ၀ကိုရောက်အောင်လုပ်နေတာလား…..အော်မြန်မာပြည်သူတွေ…လူဖြစ်ရကျိုးမနပ်ပါလား…နောက်ထပ်တိုက်ပွဲဆင်ရအုံ့ မှာလား သားစဉ်မြေးဆက်ပေါ့…..
aung sun April 25, 2012 at 6:55 pm · ·
ဒင်းတို့က ကော ပါတီအကျိုးကိုကြည့်နေတာလား…. ပြည်သူ့အကျိုးကိုကြည့်နေတာလား… မြန်မာပြည်မှာ ပြောင်းလဲတာဆိုလို့ သန်းရွှေကနေသိန်းစိန်ဖြစ်သွားတယ်… ၂၀၀၈ ခုနှစ်အခြေခံဥပဒေကလည်း သန်းရွှေလက်ထဲကနေ သိန်းစိန်လက်ထဲရေရောက်သွားတယ် ဆိုတဲ့ပြောင်းလဲခြင်းပဲရှိပါတယ်….
christine April 23, 2012 at 8:44 pm · ·
kophyo April 23, 2012 at 7:56 pm · ·
ဒီမိုကရေစီ ဒီမိုကရေစီ ဆိုအော်နေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီမကျတဲ့နည်းလမ်းနဲ့တောင်းဆိုတာကို လက်မခံတဲ့အတွက် သမ္မတကြီးဘက်က ထောက်ခံတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ခင်ကတည်းက ဒီအချက်ကို NLD ပါတီက လူကြီးတွေသိပြီးသားပါ။ ခုမှဘာတွေစိတ်ပြောင်းပြီး လွှတ်တော်မတက်ရပြန်တော့တာလဲ အမေစုရယ်။ မဲပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ အသည်းကြားက မဲပြားလေးတွေကို ပြန်ကြည့်ပါဦး။ လွှတ်တော်ထဲကနေပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျကျနဲ့ အခြေခံဥအဒေပြင်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
hhhh April 23, 2012 at 4:20 pm · ·
naing April 23, 2012 at 9:00 pm · ·
A good Comments .
aung sun April 25, 2012 at 6:58 pm · ·
သိန်းစိန်ကို သိပ်ဖိအားမပေးပါနဲ့ သန်းရွှေကနောက်ကနေ ကြိုးကိုင်နေတာ….. သူ့ခမျာ သန်းရွှေအလိုလည်း လိုက်ရသေးတယ်လေ…. သနားပါတယ် သမ္မတကြီးသိန်းစိန်ရယ်…..
moelwin April 23, 2012 at 3:27 pm · ·
အဲဒါဆို ဘယ်သူပြင်လို့ရလဲ၊ ကလိမ်ကကျစ်တွေ၊ စစ်တပ်ကလူတွေခွေးအဆင့်ဘဲရှိတယ်ဆိုတာသေချာနေပြီ
aung sun April 25, 2012 at 7:02 pm · ·
စစ်တပ်ကိုမပြောပါနဲ့ကွာ ဗိုလ်မှူးအဆင့်ကလွဲရင် အောက်ခြေ စစ်သားလေးတွေ စားစရာတောင်မရှိဘူး…. တိုင်းရင်းသားတွေရှိတဲ့နယ်မှာ ခိုးစားဝှက်စားနဲ့ အရှိန်အ၀ါလေးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်နေရတာ ဘ၀ပျက်သွားတဲ့ပြည်သူတွေလည်းမနည်းတော့ဘူး…. မပြောပါနဲ့ဗျာ…. ရင်နာလွန်းလို့ပါ…. ခွေးဆိုတာ အဆင့်အတန်းရှိသေးတယ်.. လူကြွေးတာပဲစားတာ… သူတို့ကလေ….
Ma Tho April 23, 2012 at 2:42 pm · ·
if you all are still controlling the power, how can she manage for our people? please transfer to her asap.agroup of you, think about yourself? how many year already all of you ruin our country and people. you all not enought, still starving? our country left nothing now? what you want to do more??? Ko Thein Sein, only one request you already said “NO”. how can to continue?